Duufaano khasaare xoogan geystay oo ku dhuftay xeebaha Koonfur bariga dhul xeebeedka India Daawo Sawirro!! | kowtharmedia.com
Home WARAR Duufaano khasaare xoogan geystay oo ku dhuftay xeebaha Koonfur bariga dhul xeebeedka India Daawo Sawirro!!
Duufaano khasaare xoogan geystay oo ku dhuftay xeebaha Koonfur bariga dhul xeebeedka India Daawo Sawirro!!
Duufaano aad u xooggan ayaa waxay ku dhuftay xeebaha koonfur bari Hindiya, iyadoo dad Kumanaan qof gaaraya ay isaga baxeen guryahooda waxaana la xiray xarumha waxbarashada la xiray.
Duufaanta ayaa wadatay roobab xoog leh iyo dabaylo waxayna ku dhufatay caasimadda gobolka Konfureed ee Hindiya ee Chennai iyo sidoo kale gobollada Tamil Nadu iyo Andhra Pradesh.
Inta aysan dhicin duufaanta Vardah, ayaa dadkii deganaa agagaarka xeebta ay isaga qaxeen guryahooda, iyadoo duulimaadka diyaaradahana la hakiyay. Duufanta ayaa sidoo kale dhibatooyin u geysatay waddooyinka ay maraan tareenada gobolkaasi.
Ciidammada badda ee Hindiya ayaa shaqoyiinkooda la hakiyay iyadoo la diyaariyay kooxo gurmad ah iyo gargaar loo gaarsiiyo dadka goobahaasi ku nool hadii loo baahdo, waxaana illaa hadda la soo weriyey dhimashada dhowr qof iyo burburka hanti badan.
Dabyelo xooggan iyo daadad ayaa cagta mariyay qeybo badan oo ka mid ah magaalada Chennai iyadoo geedo badan iyo nalalka magaalada ay dabyeluhu dhulka dhigeen.
sawiro halkaan hoose kadaawo
Previous PostMUUQAAL: Maxaad yeeli Hadii Wiishka Dabaqyadu Hoos kuula soo Go'o (Xogta Dahsoon) DAAWO!! Next PostMUUQAAL: Doorashada Soomaaliya ka socota oo dalka gelisay Lacag badan iyo goobo badan oo shidmay DAAWO!!